Ekwentị mkpanaka gị na ahịa gị dị elu | Martech Zone
Na Tọzdee, Septemba 25, 2012 Monday, September 24, 2012 Adam Obere
Y’oburu n’inwe ikike n’ile ahia n’ile, odi n’uwa bu na ha nwere nnukwu ihe ha n’ile ahia. Ọtụtụ ndị njikwa azụmaahịa na-ahụta ndị otu ha na-eme njem, na-ejide ma na-agbanye ozi karịa ka ha na-ere. Mbugharị ahịa gị na-ewere ọhụụ ugbu a.
Inye ndị otu gị ngwa mkpanaka ma ọ bụ mbadamba nke na-enye ha ohere ịnakọta data, nweta ozi, na ọbụna gwapụta (iji nnukwu ngwá ọrụ dịka onye nkwado anyị, TinderBox) ma mechie nkwekọrịta na otu ọnọdụ abụghị naanị na-eme ka usoro ahụ rụọ ọrụ nke ọma, ọ na-enye ndị ahịa gị ike imechi karịa azụmahịa deals ngwa ngwa.
Site na Mutual Mobile Infographic, a Supercharged Ahịa Force: Kedụ ka ndị otu ahịa na - eduga n'inweta ego na post-PC oge? Site na azịza ahịa enyemaka mkpanaka. Ngwaọrụ ndị a ọ bụghị naanị ime ka usoro ahịa azụmaahịa dị mfe ma dozie ya, ha na -emepụta ọdịiche ịzụ ihe maka ndị ahịa, mepee ike nke nchịkọta maka ngalaba ahia, ma metụta nzukọ niile.
Tags: mobile ngwa ọdịnalamobile ahịankwalite ahịa ahịa ekwentịNkwado ire ahịaahia ahiambadamba ngwa